Barium sulphate suppliers uye factory - China barium sulphate vagadziri
Barium sulphate yegirazi
Isina mavara orthorhombic crystal kana chena amorphous poda. Iyo huwandu hwehukama i4.30. Nzvimbo yakanyunguduka ndeye 1580 ° C. Zvinenge zvisingasviki mumvura, ethanol uye acid. Yakanyungudutswa mune inopisa yakatsiga sulfuric acid, zviri nyore kuumbana kana yaoma. Carbon inogona kudzikiswa kuita barium sulfide pa600 ° C.
Barium sulfate yemabhureki emabhureki
Natural barium sulfate, yakasarudzwa yepamusoro-giredhi barium sulfate ore uye inogadzirwa neepamberi bhora chigayo kupatsanura tekinoroji. Chigadzirwa chine chidimbu chakakamurwa chesaizi yekuparadzira, diki yakatarwa nzvimbo uye yakakwira makemikari kugadzikana. Yakakwirira yezvinyorwa zve barium sulfate, yakachena kuchena, yakachena kuchena, kukwegura kuramba. Panguva imwecheteyo, kuomarara, kuomarara uye kupfeka kuramba kwechigadzirwa kunogona kuvandudzwa, uye kugadzikana kwakanaka. Inogona kutora X-rays uye γ-ray, uye kupa izvo zvinhu neakakwira kuwanda uye pamusoro pekupedzisa.
Barium sulfate inogona kushandiswa seyakawedzera kudzikisa huwandu hwetitanium yakasviba inoshandiswa uye nekuvandudza mashandiro. Yakadzika kwazvo mafuta ekuwedzera uye kuwanda kwehuwandu hwehuwandu hunogona kuchengetedza yakawanda resin base zvinhu.
Iyo inogadzirwa neyemumba yepamusoro yemakemikari kunaya kwemaitiro, iine akakwirira epanyama zvimiro, mashoma masisitimu asina kuchena, akapfeka yunifomu akanyanya, amorphous chena upfu, isina-chepfu, isingasviki mumvura, inosungunuka mukukanda sulfuric acid, yakanyungudika zvishoma mukuvira Iyo hydrochloric acid iri kemikari. yakatsiga, uye inoderedzwa zvine bharumumu kuita barium sulfide nekabhoni Hazvizoshandure ruvara kana rikasangana nehydrogen sulfide kana gasi rine chepfu mumhepo. Icho chigadzirwa chemhando yepamusoro yezvigadzirwa zvemumba zvakafanana. Kuwedzeredzwa kwe barium sulphate mukushandisa kunogona kupa izvo zvakakwirira kubwinya, kupararira kwayo kwakanaka, uye kunogona kudzikisa mutengo.
Kuti uvandudze mashandiro echigadzirwa, chemakemikari interface kurapwa kunoitwa pane barium sulfate. Chigadzirwa chakarapwa ne organic kana inorganic pamusoro kudzikisira kusagadzikana kwepasirese uye ine kupeka kwakanaka kwazvo uye kuenderana. Yakagadziridzwa barium sulphate ine rakakamanikana chidimbu saizi yekuparadzira, yakanyanya kuchena, uye isina tsvina. Iyo ine hukama hwakasimba uye inopa iwo iwo chinhu kukwirira kwakanyanya uye kumeso kupera.
Yakakwira gloss barium sulfate
Yakakwira-gloss barium sulfate, yakasarudzwa yepamusoro-giredhi barium sulphate ore inogadzirwa neyemberi bhora yekugaya uye kupatsanura tekinoroji. Chigadzirwa chine hutete hwakatsetseka saizi yekuparadzira renji, yakatsiga makemikari zvivakwa, gloss yakanaka, yakachena kuchena, uye yakanakisa kupararira uye kuenzanisa zvivakwa.
Yakakwira-kubwinya barium sulphate ine yakanaka acid uye alkali munyu kuramba, yakanyanya tembiricha kuramba, ngura kuramba, uye kuchembera kuramba. Inogona kugadzirisa kuomarara, kuenderana uye kupfeka kuramba kwechigadzirwa, uye kuita kuti chigadzirwa chipenye uye chigadzike. Inogona zvakare kushandiswa seyakawedzera kudzikisa huwandu hwetitanium yakasviba inoshandiswa uye nekuvandudza mashandiro. Yakadzika kwazvo mafuta ekuwedzera uye kuwanda kwehuwandu hwehuwandu hunogona kuchengetedza yakawanda resin base zvinhu.
Uchishandisa yepamusorosoro nanotechnology, chigadzirwa chacho chiri organic uye inorganic dense yakavharwa poda. Narrow particle saizi kugovera, yakanaka makemikari kugadzikana, yakakwira degree rekumisikidza, kwakanaka kupararira, kukwirira kuchena uye humwe hunhu. Yakachena kuchena, acid nemishonga, alkali kuramba, yakakwira tembiricha kuramba uye hapana kurasikirwa gloss, yakanaka munyu pfapfaidzo nemishonga uye ekunze kuramba. Inogona kushandiswa zvakanyanya mumapendi akasiyana-siyana emvura, mvura-yakavakirwa huni pendi, inki, mapurasitiki nezvimwe zvigadzirwa. Inogona kuchengetedza kujeka kwezvigadzirwa. Inogona kushandiswa seyakajeka masterbatch ye barium sulphate, uye inogona kuvandudza zvakanyanya kubwinya kwepasi, kupenda firimu kuomarara, kusagadzikana kwemamiriro ekunze, uye anobatsira Focus pane uye kudzikisa mutengo.
Barium sulfate yepende
Barium sulfate yemafuta emafuta